Kukhona isigaba ezikhethekile zalabo bantu uthanda ukuzama izimonyo izitayela. Bavame uvakashele ubuhle salon, ukubuza mayelana ezintsha kwezesayensi, zama zonke izinqubo. Cishe kakade biorevitalization "Akvashayn". Izibuyekezo mayelana nale nqubo futhi ushiye iziguli ngokwabo futhi Estheticians obenzayo. Into kuphela Kunconywa ukuba bajwayelane yokwakheka izidakamizwa, ukuze ugweme ukusabela kabi komzimba.
Ukuze lokho ngokuvamile amaklayenti nekhasimende e beauty salon? Impilo? Nobuhle? Musa ukuqagela, beze intsha. Hawu, laba injabulo ngaphezu kokuvamile ukuba sibone indlela imibimbi zinyamalale, njengoba emehlweni snavyatsya izindebe kwakhahlela futhi zazivuma futhi - esifubeni! Inqubo rejuvenation kuyinto adume, futhi akukho biorevitalization ngaphandle. okokufaka beautician ngaphansi kwesikhumba asidi i-hyaluronic. Le nqubo aluhileli ukungenela odokotela abahlinzayo, kodwa linikeza imiphumela ezinkulu. It is hhayi Kunconywa ukuthi amantombazane eneminyaka engaphansi kwengu-25, lapho izimpawu zokuqala isikhumba ukuguga. Ikakhulukazi, kuthatha kuyaqina nokuqina, kome livela. Zonke lezi zinto kancane angaluboni izimonyo, kodwa okhilimu amathathu nanhlanu, asisakwazi ukumelana nalomsebenzi. Futhi odokotela abahlinzayo kungemi zonke. Zikhalele imijovo lula kakhulu.
Ngesikhathi inqubo, amaseli owethulwa asidi i-hyaluronic, ekhuthaza ukuvuselelwa kwezicubu. Kuyinto yemvelo isikhumba isici ukuthi umzimba wethu ukhiqiza i yayo. It asidi i-hyaluronic obangela hydration kwesikhumba futhi intsha yayo. Ukukhiqizwa kuyancipha njengoba ekhula, futhi inqubo wayeka, imibimbi. Biorevitalization elondoloza intsha nokulondoloza ke. Ngaphezu kwalokho, ilungisa imibimbi. Umphumela kungabonwa cishe ngokushesha, kungekho mkhawulo ekuvuthweni isikhumba. Ungenza inqubo yezinhlelo ezivimbayo futhi ukuphulukiswa kwesikhumba.
Meaning of ibonisa ngokugcwele essence yayo. Lokhu Ukuphindukuzalwa. Ukulimala ngeke kutholakale, futhi kuyadingeka ngesikhathi yokutakula. Inqubo kungenziwa kwenziwe noma iyiphi ingxenye isikhumba. Okuningi ivame ukubhekana entanyeni, ulayini cleavage, izandla kanye nobuso. Ingabe izindawo engakuthandi kakhulu umthelela emisebeni ultraviolet. Umphumela kungaba nokuncipha kuyaqina kanye ukubukeka imibimbi entsha. Ukuze silondoloze umphumela, udinga ukuchitha kwamaseshini ambalwa nge esingaba izinsuku 15-20 of. Umthelela iqhubeka izinyanga eziyisithupha ngemva inkambo ukwelashwa.
Kungaba udluliselwe biorevitalisation amasu mesotherapy. Inqubo cishe kobuhlungu ngakho izinzwa akudingekile, kodwa uma ufuna udokotela ephatha izindawo izinzwa wamafutha. Ngemva inkambo ekuthuthukiseni ukugeleza kwegazi futhi umzimba, kulesetayelekile ibhalansi amanzi, kuthuthukisa ibala. Beauticians belulekwa ukuba afeze inqubo izifo zesikhumba, ukuvuvukala, komzimba nezinto, umuthi igazi thinners, kanye phakathi nokukhulelwa kanye lactation.
Umuthi libhekene "Akvashayn" ngoba biorevitalisation?
Isayensi njalo ukuthuthukisa, futhi kwatholakala ukuthi asidi i-hyaluronic kungenziwa kulekelelwa ukuze uthole umphumela esiyingqayizivele. yomugqa "Akvashayn" kusukela eliyifa South Korean yakhiwa izingxenye ezengeziwe nedlanzana ukuthi usebenze, ukuqeda basekelane. Omunye ephumelela kunazo kubhekwa biorevitalization "Akvashayn". Uphenyo nomdlandla wakhe, kusukela umphumela iyabonakala ngesikhathi esisodwa. Thina kuphela kudingeka sithathe nemithi bona.
Inqubo zingahluka ngokuya indlela yokwakheka izidakamizwa. izinhlobo ezimbili. Bobabili based anti-ukuguga futhi abe high isisindo yamangqamuzana asidi i-hyaluronic. I izingoma ingxenye enkulu okufanayo, kodwa izidakamizwa "Revofil Akvashayn" umkhiqizi ungeze peptide esiyingqayizivele okwenza kungabi engu-lesikhumba. Iphinde kunciphisa ukukhiqizwa kwe-melanin esikhumbeni futhi kuvimbela ukubonakala izindawo ezintsha. Ngokuvamile lesikhumba ibonakala ngemuva kweminyaka engu-50, kodwa "Akvashayn" - imijovo ukuthi inethonya cishe imilingo, ngoba ukunciphisa zonke izinguquko ezihlobene nokukhula: qondanisa ukubonakala, kuqinisa ikhule ezimbotsheni, ugcwalise imibimbi futhi moisturize isikhumba.
Kungani-ke ngakho abathandwa abesifazane biorevitalization "Akvashayn"? Izibuyekezo cosmetologists bathi lokhu ukulungiselela ukuzixazulula zonke ezaziwayo isikhumba ukuguga, nokunikeza ephakamisa futhi amafutha, wanciphisa inani izilonda esikhumbeni, enikeza ukuvikeleka antioxidant. Kancane kancane ohlangene isikhumba, kokuba uyeke kuzolunga, okusikhumbuza isikhumba iphepha. Kuqinisa ikhule ezimbotsheni futhi normalizes sebum. Ezicutshini synthesize collagen futhi mithambo ine-elastin, kuyalungiswa ubuso okusaqanda, futhi AMANXEBA ekhona agcwaliswa kusuka ngaphakathi. Ingabe lokhu magic? Lena inqubo evamile - biorevitalization "Akvashayn". Izibuyekezo abesifazane uqinisekise ukuthi ukubonakala kuqondiswa, isikhumba iqala bonyana kukhanyise, nge nomphumela owaqhubeka isikhathi eside, kodwa zasibekela umbandela wokuthi proydon inkambo izinqubo, kunokuba eyodwa-off mcimbi.
Sekuvele kafushane, okungekhona it is hhayi Kunconywa iphendukele le nqubo, kodwa uhlu Izimo imijovo "Akvashayn" abe obanzi kancane:
Hypersensitivity emuthini futhi izithako kwengoma. "Akvashayn" - biorevitalization kabani Ukwakheka sicuketse 56 izithako.
Ukuba khona izifo zesikhumba ezingamahlalakhona.
Awukwazi ukwenza inqubo inqubo ethola anticoagulants.
Yandisa ukuvinjelwa Izifo ukuvuvukala, hemophilia, herpes kanye nesifo sikashukela.
Ngaphambi izobanjelwa Meso noma biorevitalization, kutuswa ukuba kukhawulwe reception utshwala ngosuku noma izinsuku ezimbili.
Inqubo "Akvashayn" (biorevitalization) Kushiwo ngamuphi umqondo? Yokusetshenziswa zomuthi, injected ngaphansi kwesikhumba, izifundo ukude, okuyinto ngenhlanhla upholisa kakhulu imfundamakhwela ezindabeni ezinjengalezi. Kumnandi ukuba ukuqonde lokho bavezwa futhi ngaziphi izinjongo. "Akvashayn" ikhiqizwa inqubo umthamo iphakethe 1. I isipetu isivele 2 ml ukulungiswa. Ukusebenzisa izinaliti ekhethekile, 32G usayizi "Akvashayn" inqubo (biorevitalization).
Ezemfundo kusekelwe sokuhlanzwa kancane kancane nokusebenzisa izidakamizwa. Oku kahle ukuhlanza isikhumba. Akubalulekile ukuba beze beautician inqubo eyenziwayo up. Kahle kahle, isikhumba kufanele kuhlanzeke futhi kube kusha. By endleleni, umphumela ke izobonwa ngokucace kakhudlwana. On isicelo, umthelela ongaba isikhala cosmetologist amaphilisi ezinhlungu.
Lapho isikhumba kuyinto ndikindiki kancane, cosmetologist ukwenza ezinye yomdwebo ukucacisa indawo ye umjovo. Udokotela eqala ukwenza isibhamu kusukwa umhlathi futhi ushintsho bushelelezi ngayo yonke ubuso ndawo. Phakathi imijovo kumele kube ngezikhathi cishe 0.8-1 mm. Okwenziwe kanye yonke indawo, udokotela ehleliwe. Ekugcineni sisebenzise opholile imaski eziphumulele kanye isikhumba elangeni.
Yini odokotela bethi?
Noma yimuphi iklayenti ye salon ubuhle kuyoba mnandi futhi ezithakazelisayo ukwazi ukuthi umbono lowo beautician ku inqubo eqhubekayo. Bathini mayelana "Akvashayn". Izibuyekezo beauticians okukhuthazayo, ngoba amatasa ukuncoma amakhasimende izidakamizwa. Ngo oyiyo - a izinto asebenzayo esiyingqayizivele, ogama umphumela kusekelwe abambisana ngokugcwele. Ayikho kokungenela nabanolaka umsebenzi emzimbeni. Ayikho isikhathi adingekayo yokutakula. Okungenani - 3 izinqubo kwenziwa ngezikhawu. Uma isikhumba kakhulu umkhankaso, kunconywa 6 izikhathi. Kulokhu, nalesikhathi kumele kube okungenani amaviki amabili. lift amaklayenti Yangaphakathi nomuzwa emva inqubo yokuqala, kanye nomphumela oqabulayo bubonakala ngosuku. Beauticians kusikisela ukuthi kukhona nethonya ezuziwe, njengoba izidakamizwa kuvusa umzimba ukusebenza ngokuzimela ukuvuselelwa kwesikhumba. Ochwepheshe ukweluleka ukwenza ukwelashwa okungenani ezintathu ngonyaka, hhayi ukuba esimweni lapho evakashele beautician kuba nesidingo. Lapho Yiqiniso kuyadingeka, kuzodingeka ukuba uvakashele emtholampilo njalo ezinyangeni ezimbili. Kungcono ukuchitha amaseshini ngesikhathi uchwepheshe wakho omethembayo oyaziyo izici isikhumba nezinkinga ezikhona lesiguli.
Ingabe Ukulunywa intengo?
Mhlawumbe umbuzo obaluleke kunayo - leli banga intengo lapho iyala biorevitalisation inqubo. Can ukukhokhela okunethezeka ezifana isakhamuzi isilinganiso ezweni lethu noma kufanele ugcine, futhi mhlawumbe uthathe imalimboleko? Thina khawuleza Qinisekisani amanani senhlobo inqubo ruble 10 kuya kwezingu-12. Uma ushayele umtholampilo ukwazi kangcono lokho izidakamizwa isetshenziswa "Akvashayn" (intengo kuncike zinhlobo) futhi azikho izaphulelo uma ufuna ukuyofunda khona ngokugcwele. Uma impendulo yombuzo othi zokugcina kungaba sina londoloza. Ngokuvamile, kuvela ukuthi ukuthatha inqubo yokuhlola disadvantageous, njengoba ezibizayo. Kodwa yonke inkambo izobiza kujabulise intengo, futhi umphumela uyoba izinyanga 6 okungenani. Nalapha futhi, amanani iyashiyana esifundeni ohlala kulo. Ukuziphilisa edorobheni elincani kusitjhijilo ungenza inqubo ayizinkulungwane 8-9. Intengo isilinganiso ngenkambo kuyoba ababecishe babe izinkulungwane 25-27 ruble. Kodwa emizini emikhulu kulula ukukhetha onguchwepheshe okunokwethenjelwa njengoba umtholampilo. Iklayenti kumelwe siqiniseke ukuthi ngeke azizwani nomzimba. By the way, leli phuzu kwenzeka kaningi ukubuyekeza negative. Nokho, beauticians njalo baxwayisa ngokuthi yokungezwani komzimba kuyinto contraindication. Ngaphambi inqubo wenziwa phezu isheke ukuzwela, futhi uma iklayenti alisho lutho izici zomzimba wakho, khona-ke thatha umthwalo.
Ekugcineni, kudingeka uthole ukuthi yini abantu abavamile ukhulume "Akvashayn". Inani Yiqiniso, omunye akajabuli ikakhulukazi. Nokho, ukuze umuntu wanamuhla 10,000 - ngempela imali sina ukuthi kunzima ukunikeza inqubo olulodwa. Abesifazane ku ukubuyekeza, ngezinye izikhathi ebhaliwe, ukuthi umphumela akusho bathethelele izindleko, kodwa angisho ukuthi zingaki izinqubo abakwenzile, futhi waba yini umphumela ngesimo sokuqala kwesikhumba. Eqinisweni, umenzi uthembisa into ethize - ubungcono ibala lesikhumba, imibimbi ukugcwalisa, amafutha. Zithanda noma zingathandi, kodwa esuka ekujuleni emphethweni Nasolabial noma "ithrekhi lacrimal" akakwazi ukususa, kodwa biorevitalization futhi ayiboniswanga lugxile ezindabeni ezinjengalezi. Beautician kusiza ukuchaza izinqubo ezidingekayo. Ikakhulukazi, kungase ukuncoma asidi i-hyaluronic imijovo, ezijulile massage imaski noma ukuhlinzwa.
Lezi zintokazi eneminyaka engu-iminyaka engu-35 isixazululekile on inqubo biorevitalisation rejuvenate. Basuke bakhathazekile imibimbi, okungase imaski ukhilimu eqolo. Akungcono ukunikeza isizumbulu ngesikhathi esisodwa, kodwa phezu nomphumela owaqhubeka isikhathi eside? Ladies isikhathi eside ukucabanga bese unquma. Kunezikhathi lapho futhi bazishaye isifuba ngokuthi cosmetologist, echaza ukuthi abasha ubuso amahle uyonika isisusa ukusebenza bese uvumele sokukhokha imali ebolekiwe ngokushesha. Ezimweni eziningi, umphumela kuba emangalisayo, kusukela imibimbi ziphelelwa ebonakalayo, walahlekelwa isikhumba inkinga ukuphelelwa amanzi emzimbeni.
Kusukela beneminyaka abesifazane 40 akhononde amnyama nebala engalingani. Ngakule yobudala kuthathela ukuphazamisa entanyeni, njengoba ayisekho ubukeka abasha. Ngakho Okusaqanda ubuso lisakazeka eziningana, futhi kubonakala ubudala wesifazane. Ngokwenza ngcono ukugeleza kwegazi ibala kuqondiswa, kuba soft futhi ezimnandi. Kubonakala sengathi abesifazane abasebasha iminyaka 5-7. Yini ongayisho mayelana imizwa amakhasimende. Kakade, abangane ababukele ngesithakazelo umona amadoda, ovame awuboni izinto ezincane, nje uqaphele iqiniso ukuthi abesifazane kufanele bangabi futhi wamukelekile ukufana ubuhle omagazini fashion. Empeleni, abesifazane beba more uzilungise.
Ladies emva ayisithupha futhi ushiye impendulo enhle mayelana biorevitalisation. Kodwa udinga ukusebenzisa njalo ukuba uqiniseke umphumela. Kancane kancane eshelelayo edabukisayo "izinyawo likhale sika" ezizungeze amehlo, isikhumba kuba fresh futhi nokunwebeka, okukuhle ikakhulukazi ngalesi yobudala. ephakamisa umphumela uhlala isikhathi eside ukuze abesifazane sebeqala ukukhohlwa yayibukeka njengesikhonyane ngaphambili. ubuso ukucubungula kobuhlungu ngokuphelele. Yiqiniso, udinga ukuthola udokotela wakho ukuba afeze izinqubo for lokuvikela. Ukuze ovuthiwe isikhumba njalo - ibe yisibambiso intsha okuphakade. It kuvela ukuthi ukuguga kungaba kuhle uma ngesikhathi esifanayo ezithile ukubheka omncane!
Ingabe ikhona impendulo engeyinhle? Njengoba sekushiwo, zingabantu, kodwa njengoba ngobufakazi obubekwe ngaphambili amaqiniso eziyinqaba. Ngokwesibonelo, abanye abesifazane emva 30 ukugqamisa ukuthi umphumela kancane, ngaphandle ukuthi isikhumba alibe lisaba ezomile, eshelelayo futhi freshens. Yiqiniso, ladies ngokwabo baye basikisela ukuthi kungase kudingeke izindleko ukuqala ukubhekana nazo ngaphambili, ukuze ususe izinguquko ezihlobene nokukhula esikhathini.
Ladies angaphezu kuka-40 angasifaka isikhalo ngaleso sikhathi, ngemva ebusweni kuyinto izinqubo ukuvuvukala. Uma eliphansi umtholampilo, umphumela onjalo kungenzeka, kodwa kusho ukuthi umuthi eliphansi. Mhlawumbe, ke buhlanjululwe asalayo. It is hhayi Kunconywa ukuba ugcine on ubuhle yabo. Uma kunjalo unquma biorevitalisation inqubo, khetha emtholampilo ukunakwa kanye nomthwalo wemfanelo.
Kubangele ukudideka impendulo hlangothi. Ngokwesibonelo, abesifazane abaneminyaka engu-55 ukuqaphela ukuthi imibimbi emva kokwelashwa ziyancipha kakhulu, ukubonakala baba enempilo futhi kujabulise ngokwengeziwe, kodwa wayefuna imiphumela engcono. Ngakho-ke, kulesi sigaba emakhosazaneni isinqumo ukuphinda inkambo izinqubo.
Kodwa abesifazane abasebasha akhononde yokuthi 100% Imiphumela kungukuthi etholwe. Bit ngcono isimo sesikhumba, kodwa enhle kakhulu Awekho izinguquko. Mangisho ukuthi izinguquko zangaphandle ziyabonakala okungenani, futhi uma zibonakala ngokubona okubonakala ngeso lenyama, kusho ukuthi izinqubo zangaphakathi umfutho ngokugcwele. Ngaphandle biorevitalization ke kunomphumela ayesehle, futhi umphumela kuboniswa ngemva kwesikhathi esithile Yiqiniso.
Ngenxa yalokho, kufanele kusho ukuthi inqubo ithola izibuyekezo ahlukahlukene, kodwa ikakhulu omuhle. Akekho uthi akukho nomphumela noma alivumi. rejuvenation ezingeni Yiqiniso, kuncike izici umzimba engu iziguli. Kungakhathaliseki noma cha ukusebenzisa le nsiza e salon ubuhle? Impendulo ilula: kubalulekile, kodwa uma udinga ngempela. Awudingi ukuba iphenduke Maniac, nokujaha kwentsha. Uma usemusha futhi enhle, it is basathembele emzimbeni wakho. Bheka beautician, uma uqaphela izimpawu zokuqala ukuguga kwesikhumba.
Izinkinga ngesikhumba: izimbangela kanye nokwelashwa. Ubuso imaskhi carbon isebenze
Uyaxebuka ukwenza ekhaya
Indlela ukususa emphethweni Nasolabial ekhaya: Izincomo
"Goji ukhilimu Hendel": omuhle kanye nokubuyekeza ezimbi, ukwakheka
Burning ukuzwa ku urethra
I metro station "Kropotkinskaya": izikhangibavakashi
Indlela ukufaka ukwakheka e "Minecraft"? Kulula kanjalo nje!
Amagilavu: ukunitha scheme, izithombe, incazelo
"Ceftriaxone": kadokotela ngesiLatini, umsebenzisi, isicelo, Izimo
Thrombophlebitis: Izimpawu kanye Ukwelashwa Izindlela
Kungani inja uya phansi ngupapa? izizathu
Luteinizing i-hormone: abesifazane evamile futhi ngeziphambeko
Verdigris: izakhiwo kanye nezici